Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » Ukurhweba ngabantu lulwaphulo-mthetho lwehlabathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Uninzi lwabantu bonke kwishishini lokuhamba nokhenketho banokuvuma ukuba ukuThengisa abantu ngolwaphulo-mthetho. I-UNWTO phantsi kobunkokheli obukhoyo ishenxise iQela eliSebenzayo ekuXhatshazweni kwabantwana ngokwesondo, yintoni engasisusi lo mbandela ubalulekileyo. I-WTTC ime. I-WTN iliqhwabela izandla inyathelo le-WTTC ngokuchaza icala elimnyama lokhenketho, ukurhweba ngabantu.
The IBhunga leHlabathi lezoKhenketho noKhenketho (WTTC) isungule ingxelo entsha enkulu ebonisa ukuba icandelo lezoKhenketho noKhenketho kwihlabathi liphela linganceda njani ukuphelisa ukurhweba ngabantu.
Ingxelo ikhutshwa ngenkxaso yeCarlson Family Foundation kwaye yakhela kwiQela lokuSebenza ngokuThengisa abantu le-WTTC, elasungulwa ngo-2019 kwiNgqungquthela yeHlabathi eSeville, eSpain.
Ingxelo yayo ethi 'Ukuthintela ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni: iNkqubo-sikhokelo yokuSebenza kweCandelo loKhenketho noKhenketho, i-WTTC ijonge ukomeleza intsebenziswano kubo bonke abathathi-nxaxheba kunye nokwabelana ngezona ndlela zibalaseleyo zokwazisa malunga nokuba icandelo lingenza njani, kwaye lenza njani, lenza umahluko, ukuze lisombulule eli lizwe ulwaphulo-mthetho.
Ingxelo inika iinkcukacha ngesakhelo sokujongana nokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, malunga neentsika ezine eziphambili: Ukwazisa, ukuFundisa nokuQeqesha, ukuBhengeza kunye neNkxaso.
Umbutho wabaSebenzi weHlabathi (i-ILO) uqikelele ukuba nangaluphi na usuku ngo-2016, bangaphezulu kwezigidi ezingama-40 abantu kwihlabathi liphela baba ngamaxhoba okurhweba ngabantu.
Ubhubhane akakhange abeke ukukhanya kwindawo yokungalingani esele ikho kodwa ubenze mandundu. Oku kukhawulezise isidingo esingxamisekileyo sezenzo ekujoliswe kuzo kwicandelo loKhenketho noKhenketho.
Le ngxelo ibonelela ngezisombululo ngaphakathi kwicandelo nangaphaya, njengoko ubunzima besi senzo solwaphulo-mthetho lwelizwe jikelele kufuna iinzame zoqeqesho oluninzi kunye namanyathelo okulungelelaniswa kwabathathi-nxaxheba, anjengamazwe, iinkampani zabucala kunye nemibutho yamanye amazwe kwihlabathi liphela.
Kwicandelo loKhenketho noKhenketho, oku kuthetha ukubandakanya ubuchule babo bonke abachaphazelekayo, kubandakanya abasindileyo, kunye nemibutho yoluntu ukumisela amaphulo ngokudibeneyo.
UVirginia Messina, uSekela Mongameli oPhetheyo, kunye ne-CEO ebambeleyo, i-WTTC ithe: “Ukurhweba ngabantu lulwaphulo-mthetho olwenzeka kubantu abasemngciphekweni, luqhubeke lukhula kwaye luchaphazele ubomi bezigidi kwihlabathi liphela.
“Le ngxelo ibalulekileyo inikezela ngesakhelo secandelo loKhenketho nezoKhenketho ukuba lidlale indima yalo ukunceda ekulweni ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni. Ngenxa yokungaqondi kwecandelo kwindlela yabarhwebi abangabantu, kufuneka sithwale uxanduva lwethu lokuqinisekisa ukuba icandelo loKhenketho noKhenketho libonelela ngendawo ekhuselekileyo neyamkelekileyo kwabo basebenza kulo.
“Ekugqibeleni, uhambo yinto edibanisa abantu, kwaye kubalulekile ukuba sincedise ekulungiseni olu lwaphulo-mthetho.
“Icandelo lidinga indlela emanyeneyo kwaye ligxile kwimizamo yalo yokuqhubela phambili ubhengezo olunxulumene nokurhweba ngabantu ngokubandakanya bonke abachaphazelekayo. Siyathemba ukuba le ngxelo inganceda kulo msebenzi. ”
Le ngxelo inzulu igxininisa isidingo sokusebenzela ukuqhuba indlela eya kuthi inyuse ukuqonda kolwaphulo-mthetho lokurhweba ngabantu, yenza ukuba kuchongwe ngcono, kuthintelwe, kwaye kuncitshiswe iimpembelelo ezinokubakho nezona zichanekileyo zeli candelo, kunye nokuqhubela phambili ukusebenzisana kukarhulumente namashishini abucala qinisekisa ukuba kuthathwa amanyathelo afanelekileyo ngoorhulumente xa ukurhweba ngabantu kuthe kwafunyanwa.
Ingxelo iphehlelelwe kwangaphambi koSuku lweHlabathi ngokuchasene nokuRhweba ngabantu ngokungekho mthethweni (umhla wama-30 kweyeKhala), ebonisa ukubaluleka kokumamela nokufunda kumaxhoba okurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni.
I-WTTC ikwangathanda ukubulela le mibutho ilandelayo ngokufaka isandla kule ngxelo ibalulekileyo: UCarlson, CWT, AMEX GBT, Marriott International, Hilton, Ingle, JTB Corp, ECPAT International, Airbnb, AIG Travel, Bicester Village Shopping Collection, Emirates, Expedia Group, ITF, Sisigwebo sePenal, Perspectives Marano.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi Uqhwabela izandla umzamo weWTTC wokujongana nesi sifundo sibalulekileyo nesimnyama.
Agasti 1, 2021 kwi-21: 53
Enkosi Juergan ngokuthumela le nto. (Isiqendu sokuqala sasine-typo nangona, ndiyakholelwa?) Ewe, ukurhweba ngabantu ngokuSisiseko kubukhoboka babantu. Ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni yeyona nto yoyikekayo, ngakumbi kwezo zisetyenziselwa ukuxhatshazwa ngokwesondo. https://www.jonwedgerfoundation.org/rains-list Okukhona abantu besazi ngezi zenzo zolwaphulo-mthetho ngokuchasene noluntu, kokukhona sinokubenza bayeke.